नेतृत्वप्रति कांग्रेस सभासद् आक्रामक : बिपीले समावेशीकरण सुरु गर्नुभएको थियो । तपाईंहरू बाह्मणलाई समावेशिता मन नपरेको रहेछ । दलितलाई शून्य बनाउन खोज्नुभयो । यो नियतवश गर्दै हुनुहुन्छ । म तत्काल विद्रोह नगरौँला । तर, बिस्तारै विद्रोह हुन्छ ; मीन विश्वकर्मा « जागरण मिडिया सेन्टर
Home » समाचार » नेतृत्वप्रति कांग्रेस सभासद् आक्रामक : बिपीले समावेशीकरण सुरु गर्नुभएको थियो । तपाईंहरू बाह्मणलाई समावेशिता मन नपरेको रहेछ । दलितलाई शून्य बनाउन खोज्नुभयो । यो नियतवश गर्दै हुनुहुन्छ । म तत्काल विद्रोह नगरौँला । तर, बिस्तारै विद्रोह हुन्छ ; मीन विश्वकर्मा
नेतृत्वप्रति कांग्रेस सभासद् आक्रामक : बिपीले समावेशीकरण सुरु गर्नुभएको थियो । तपाईंहरू बाह्मणलाई समावेशिता मन नपरेको रहेछ । दलितलाई शून्य बनाउन खोज्नुभयो । यो नियतवश गर्दै हुनुहुन्छ । म तत्काल विद्रोह नगरौँला । तर, बिस्तारै विद्रोह हुन्छ ; मीन विश्वकर्मा
२०७२ असार १८ जागरण मिडिया सेन्टर ।
भ्याकेटमा किन गइएन ?
सर्वोच्चको आदेशपछि भ्याकेटमा जान सकिन्थ्यो, तर किन बेवास्ता गरियो ? अहिले राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश मधेसी छन् । भोलि पहाडिया आएपछि त्यसको म्यासेज के हुन्छ ? ख्याल गर्नुहोस् ।
कांग्रेस एमाले र माओवादीजस्तै भयो
सुप्रिम कोर्टको निर्णय नमान्ने भनेर हामी एमाले र एमाओवादीजस्तै भयौँ । धर्मनिरपेक्षता होइन, धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । विदेशीले जे भने हामी त्यसैमा लागिरहेका छौँ । हामी जनताबाट निर्वाचित भएर आएका हौँ । संविधानबारे जनमतका लागि एक महिनाको समय दिनुपर्छ ।
धार्मिक स्वतन्त्रता किन छोडियो ?
कार्यतालिकाको विधिलाई निलम्बित गर्दा जनताको राय समाहित हुँदैन । त्यसैले जनतालाई सुझाब दिनबाट वञ्चित गर्न हुँदैन । नेपालको राष्ट्रिय झन्डालाई यथावत् राख्दा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई पनि कायम राख्नुपर्छ, किन छोडियो
कांग्रेसका ब्राह्मणले समावेशिता छोडे
बिपीले समावेशीकरण सुरु गर्नुभएको थियो । तपाईंहरू बाह्मणलाई समावेशिता मन नपरेको रहेछ । दलितलाई शून्य बनाउन खोज्नुभयो । यो नियतवश गर्दै हुनुहुन्छ । म तत्काल विद्रोह नगरौँला । तर, बिस्तारै विद्रोह हुन्छ ।
कांग्रेस सभासद्हरूले संविधानको मस्यौदामा आफ्ना मुद्दा राख्न नसकेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् । मस्यौदामा बहुलवाद नराखिएको र अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गरिएकोप्रति कांग्रेस सभासद्हरूले नेतृत्वको आलोचना गरेका हुन् ।
कांग्रेस संसदीय दलको बिहीबार बसेको बैठकमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्ने र ‘फास्ट ट्रयाक’मा संविधान जारी गरेमा मुलुक द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी पनि सभासद्हरूको चेतावनी छ । भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री विमलेन्द्र निधि, सभासद्हरू डा. शेखर कोइराला, मनमोहन भट्टराई, अमरेशकुमार सिंह, मीन विश्वकर्मा, मानबहादुर विश्वकर्मालगायतले नेतृत्वको आलोचना गरेका हुन् ।
मन्त्री निधिले १६ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भनी अदालतले दिएको आदेशलाई बहुदलवादी पार्टी कांग्रेसले अवज्ञा गरेर गल्ती गरेको बताए । ‘बहुदलवादी पार्टी, विधि मान्ने पार्टी कांग्रेसले नै अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्‍यो,’ बैठकमा निधिले भने, ‘आदेशका सम्बन्धमा भ्याकेटमा जान सकिने थियो । अहिले मधेसी राष्ट्रपति, मधेसी प्रधानन्यायाधीश छन् । भोलि पहाडिया आएपछि त्यसको म्यासेज के हुन्छ ? ख्याल गर्नुहोस् ।’
अन्तरिम संविधानलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेशको सीमांकन र नामांकन नै नगरी फास्ट ट्रयाकका नाममा छिटो संविधान जारी गर्न खोज्दा भविष्यमा ठूलो संकट आउनसक्ने पनि मन्त्री निधिले बताए । प्रदेशको सीमांकन तथा नामांकनलाई छिटो आयोग बनाएर टुंग्याउनुको सट्टा अदालतको आदेशलाई पनि बेवास्ता गरेर कांग्रेस अगाडि बढ्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
सभासद् डा. शेखर कोइरालाले विधि र कानुनी शासन मान्ने कांग्रेस अदालतको आदेशपछि एमालेको पुच्छर भएको आरोप लगाए । ‘सुप्रिम कोर्टको निर्णय नमान्ने भनेर हामी एमाले र एमाओवादीजस्तै भयौँ । हामीहरूले विज्ञप्ति पनि निकाल्न हुने थिएन । भ्याकेटमा जानुपथ्र्यो,’ कोइरालाले बैठकमा भने, ‘अहिले मधेसी राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीश छन् भन्ने मानसिकताले सोचेर अगाडि बढ्नुहँुदैन । कानुनी शासन र विधिको शासनको दुहाइ दिने हामी एमालेको पुच्छर भयौँ ।’
१६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने अदालतको आदेश चित्त नबुझेमा भ्याकेटमा जानुपर्ने कोइरालाको भनाइ थियो । ‘कोर्टको आदेश चित्त बुझेको छैन भने पुनरावेदनका लागि जाने छँदै छ, यसैगरी तिक्तता उत्पन्न भए संविधान निर्माणमा अप्ठ्यारो पर्छ,’ उनले भने, ‘विधिको कुरा अरूलाई सिकाउने कांग्रेस अहिले चुकेको छ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सुप्रिम कोर्टलाई मात्रै छ ।’
६ महिना वा एक वर्षसम्म संघीयताको विषय थाती राख्न खोजिए द्वन्द्व निम्तने चेतावनी पनि कोइरालाले दिए । ‘संघीयतामा आठ प्रदेशको विषय छ । नामांकन र सीमांकन विज्ञ सम्मिलित आयोग बनाई छिटै टुंग्याउँm,’ उनले भने, ‘नत्र द्वन्द्व हुने खतरा हुन्छ ।’
९५ प्रतिशत सभासद् चार दलका पक्षमा छन् भनेर मधेसी, जनजाति, माओवादीलाई पेलेर जान नहुने कोइरालाले बताए । ‘९५ प्रतिशतकै दम्भमा मधेसी, जनजाति, माओवादीलाई पेलेर जानुहुँदैन । उनीहरूलाई सम्झाउनुपर्छ, बुझाउनुर्छ,’ उनले भने ।
फास्ट ट्रयाकमा संविधान निर्माण गर्ने नाममा जनमत नलिने कुरा उपयुक्त नहुने पनि कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘हामी जनताबाट निर्वाचित भएर आएका हौँ । कस्तो संविधान बनाउँदै छौँ भनेर जनतालाई बताउन जरुरी छ । उनीहरूको विचार लिनुपर्छ । एक महिनाको समय जनमतका लागि दिनुपर्छ ।’
राष्ट्रको सफलता र असफलता बहुलवादसँग जोडिएको भन्दै कोइरालाले संविधानको प्रस्तावनामै बहुलवाद उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरे । ‘बहुलवादविनाको संविधान नै हुँदैन । प्रस्तावनामा बहुलवाद उल्लेख गर्नुपर्छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा बहुलवाद होइन । राष्ट्र असफल हुने कारण नै बहुलवादलाई अस्वीकार गर्नु हो,’ उनले भने, ‘समावेशी आर्थिक, राजनीतिक संस्था हुनुपर्छ । बहुलवाद भएन र समाजवाद भनेर गए देश अधिनायकवादमा जान्छ ।’
धर्मनिरपेक्षता नभई धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा संविधान बोल्नुपर्ने पनि कोइरालाको भनाइ छ । ‘संविधानमा धर्मनिरपेक्षता होइन धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । हामीले मौलिकता गुमाइरहेका छौँ । विदेशीले जे भने त्यसमा लागिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘धर्मनिरपेक्षता शब्द युरोपबाट आएको हो । चर्च र जनताको लडाइँबाट यो जन्मियो । तर, हाम्रोमा यस्तो लडाइँ छैन ।’
सभासद् मनमोहन भट्टराईले अदालतको आदेशलाई कांग्रेसले सम्मान गर्न नसकेको बताए । कुनै पनि वाद प्रजातान्त्रिक संविधानमा नअटाउने उनको भनाइ छ । ‘समाजवाद या अरू कुनै वाद संविधानमा राख्ने विषय होइन । अटाउँदा पनि अटाउँदैन । कम्युनिस्टको संविधानका केही अपवाद हुन सक्छन्, तर लोकतान्त्रिक संविधानमा त्यस्तो हुँदैन,’ उनले भने ।
नेपालको राष्ट्रिय झन्डालाई यथावत् राख्दा धर्मनिरपेक्षताभन्दा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई कायम राख्नुपर्ने भट्टराईले बताए । फास्ट ट्रयाकमा संविधान निर्माण गर्दा दुर्घटना निम्त्याउने उल्लेख गर्दै भट्टराईले पनि जनमत लिने प्रक्रिया निलम्बन गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘कार्यतालिकामा भएका विधिलाई निलम्बित गर्दा जनताको राय समाहित हुँदैन । त्यसैले जनतालाई सुझाब दिनबाट वञ्चित गर्नुहुँदैन ।’
सभासद् मीन विश्वकर्माले पार्टीका बाह्मण नेतालाई समावेशिता मन नपरेर समावेशी शून्य संविधान बनाउन खोजेको आरोप लगाए । ‘बिपीले समावेशीकरण सुरु गर्नुभएको थियो । तपाईंहरू तीनजना बाह्मणलाई समावेशिता मन नपरेको रहेछ । दलितलाई शून्य बनाउन खोज्नुभयो । यो नियतवश गर्दै हुनुहुन्छ,’ बैठकमा विश्वकर्माले भने, ‘संविधान रहला, तर तपाईंहरू रहिरहनुहुँदैन । म तत्काल विद्रोह नगरौँला । तर, विभेदको कुरा म छोरालाई सुनाउँछु । उसले साथीलाई सुनाउँछ । र बिस्तारै विद्रोह हुन्छ ।’
सबैको स्वामित्व स्विकार्ने संविधान निर्माण हुनुपर्ने भन्दै सभासद् विश्वकर्माले १९१० मा राणाहरूले, पछि दल, पञ्चायत हुँदै पुन: दलहरूले संविधान लेख्दा पनि बाँकी नेपालीलाई उपेक्षा गरिएको बताए । उनले भने, ‘संविधान तपाईंहरूले आफ्नाबारेमा लेख्दै हुनुुहुन्छ, समावेशितालाई बिर्संदै हुनुहुन्छ ।’
बैठकमा सभासद् चन्द्र भण्डारी र महेन्द्र राय यादवले अदालतको आदेश अन्तिम नभएको भन्दै कुनै पनि बहानामा अहिले संविधान निर्माण रोक्न नहुने बताए । यसैगरी, सभासद् सुजाता कोइराला र आरजु देउवाले संविधानको मस्यौदाले महिलालाई विभेद गरेको बताएका थिए । उनीहरूले आमा र बाबुको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
यसअघि बुधबारको बैठकमा सभासद् प्रदीप गिरिले विधि र लोकतन्त्रलाई आदर्श मानेको कांग्रेसले अदालतको आदेश उपेक्षा गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । सभासद्हरूले मस्यौदामा सुझाब दिने क्रम नसकिएपछि शुक्रबार पनि बैठक बोलाइएको छ ।
– See more at: http://www.enayapatrika.com/2015/07/13979#sthash.ta0q247z.7K8Z9Xnj.dpuf
By जागरण मिडिया सेन्टर in समाचार on July 3, 2015 .
← प्रारम्भिक मस्यौदा दलितमैत्री नभएको गुनासो	हलिया मुक्तिका ७ वर्ष →